Sebenzisa, uthengise, kwaye unxibelelane ngeFadstack Launch Pad | Martech Zone
Sebenzisa, uthengise, kwaye unxibelelane ngeFadstack Launch Pad
NgoLwesihlanu, Novemba 23, 2012 NgoMvulo, nge-1 kaJanuwari, 2018 Douglas Karr
Enye yezinto ezipholileyo malunga nokuba yiarhente yentengiso kunye nokusebenza Martech Zone kukuba sisebenzisa izixhobo zabaxumi bethu ngeesayithi zethu kunye neesayithi zabaxumi bethu. IFomstack Bezizihlobo ukusukela ekusekweni kwabo… ngenene phambi kokusekwa kwabo. Ndonwabe ngokusebenza nomnye wabasunguli kwiminyaka elishumi eyadlulayo kwaye bendithanda ukumbona etsiba inqanawa kwimithombo yeendaba zemveli kunye nokuqalisa IFomstack.
IFomstack ngoku ikhule yaya kutsho ngaphezu kwabasebenzisi abayi-100,000! Kwaye sinebhongo ngokumangalisayo ngokuba nabo njengomxhasi weMartech.
Kukho abanye abakhi beefom phaya kwaye kukho abakhi beefomu abanelungelo kumaqonga athile. IFomstack uqhekeze icandelo elikhulu lentengiso kuba abathengisi bokwenene kunye neqonga le-agnostic. Elinye lamaqhosha amancinci awaziwayo IFomstack Impumelelo, nangona kunjalo, kukuba benze umsebenzi omangalisayo ekwakheni ukudityaniswa kwemveliso kunye namanye amaqonga. Uluhlu luyamangalisa… kwaye ngoku IFomstack I-beta ikhuphe iqonga elongezelelweyo elibizwa ngokuba Qalisa iPad.
IPadstack entsha yokuSungulwa kwePad liqonga elidityanisiweyo leefom ezikwi-intanethi, amaphepha ewebhu, iivenkile ze-e-commerce, kunye nezixhobo zokuthengisa nge-imeyile, ezilungiselelwe ukuthatha ishishini lakho elincinci ukuya kwinqanaba elilandelayo. Yiziko leapps ezilula zewebhu eziza kwenza ukuba ishishini lakho libe lula kakhulu. Nali ibali elibalaseleyo lomsebenzisi IFomstack iphuhlise ukucacisa iLaunch Pad:
UOliver ungumnini wevenkile ethengisa izinto zasekuhlaleni kwaye unomdla IFomstack Umsebenzisi ujonge ukwandisa ishishini lakhe elincinci 'ubukho kwi-Intanethi. Landela ibali lendlela ayisebenzisileyo IFomstack Launch Pad ukuthatha ishishini lakhe liye kwinqanaba elilandelayo.
Sebenzisa -U-Oliver wasebenzisa isixhobo sePhepha ukwenza ubukho bewebhu obumbindi apho iindwendwe zinokufikelela kulwazi malunga neshishini lakhe kunye nekhonkco kwindawo yakhe yokugcina. UOliver wakwazi ukwenza iphepha lakhe ukuba lihambelane nemibala kunye nokuziva kwegama lakhe.
Thengisa -Kusuka kwiphepha likaOliver, abathengi banokufikelela kuyo yonke imveliso abanayo ngesixhobo seVenkile. Sebenzisa esi sixhobo, u-Oliver usete iphepha ngalinye kwimveliso nganye, evumela abasebenzisi ukuba bakhangele kwaye babeke iiodolo kwi-snap.
Ukuthetha -Emva kokuqokelela iidilesi ze-imeyile zabathengi, uOliver wayefuna ukubazisa malunga nentengiso kunye neziganeko ezizayo. Usebenzise i-Launch Pad ukwenza ngokukhawuleza imikhankaso ye-imeyile ebalaselisa ezi zinto, ekhuthaza abalandeli bakhe abatsha ukuba babuyele evenkileni, kwivenkile okanye kwi-Intanethi.
kunye IFomstack Ukuqaliswa kwePad, uyakwazi ukukhaba (okanye ukuphucula) iinzame zakho zokuthengisa kwiqonga elinye. Kulula ukuyilawula, kuthatha ixesha elincinci ukuqala, kwaye ngaphezu kwako konke, kukuvumela ukuba ubuyele kule nto ufuna ukuyenza. Qalisa isilingo sasimahla soPhehlelelo lwePad namhlanje… ubhaliso lobuchwephesha yi- $ 29 kuphela ngenyanga!
tags: bamba idathaukuqokelela idathaidatha yolwaziindlela yobumeukudibanisa i-ecommerceyokuqalisa pad
Indlela eya kwimpumelelo yeNtengiso ye-Intanethi